Saynisyahannada ayaa khiyaamayn kara ugaaratada iyaga oo geeso rhinoceros been abuur ah ku dhex sameeya Horsehair - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » SAYNISKA Saynisyahannada ayaa khiyaamayn kara ugaaratada iyaga oo geeso rhinoceros been abuur ah ku dhex sameeya Horsehair - BGR
Saynisyahannada ayaa khiyaamayn kara ugaaratada iyaga oo geeso rhinoceros been abuur ah ku dhex sameeya Horsehair - BGR
Rhinos waxaa loo ugaarsaday loona dilay geesyadoodii illaa iyo inta noocyo badan ay qarka u saaran yihiin inay baaba'aan. Qaar ka mid ah dawladaha hoose, sida wiyisha madow, ayaa ku baaba'ay meelihii ay hore ugaga soo bexeen oo ku dhowaad kuwo kaleba baaba'ay. Xaaladda ayaa ah mid aad u daran oo dadaallada ilaalinta ayaa sidii loogu talagalay aan u jeclaan lahayn sidii la rabay, laakiin sayniska ayaa awoodi kara in xal loo helo
In maqaal cusub lagu daabacay Warbixinno cilmi ah Baarayaasha waxay sharaxayaan sida ay u sameeyeen geeska rhinoceros been abuur ah iyagoo adeegsanaya timo faras. Geeska beenta ahi wuxuu leeyahay muuqaal iyo qaab dhismeed la mid ah xaqiiqda xitaa xitaa sheyga kiimikada ee geeska beenta wuxuu la mid yahay geeska dhabta ah. Way beddeli kartaa wax walba.
Ugaaratada ayaa ugaadhsiga wiyisha sababta oo ah dalabka aadka u sarreeya ee geeska. Geeska wiyisha waxaa loo isticmaalaa dhaqamada qaarkood inay ahaadaan daawo, halka kuwa kalena doorbidaan geeska sidii shey wax lagu sawiro. Baahida ayaa aad u xoog badan oo geesku macno ahaan ugu fadhiyaa miisaankiisa dahabka.
In kasta oo waxa ay dhaqamada qaarkood rumaystaan, geeska wiyisha ma aha wax gaar ah, oo waxaa laga sameeyaa isla shey nooc ah oo sameeya timaha. Waa ruuxaas in saynisyahannadu u doorteen faras-weyne beddel oo ay soo saareen qaab ay timaha iskugu xidhaan. Qaabka ay keentay ayaa ah mid adag, sida geeska dhabta ah, iyo xitaa kormeerka microscopic-ka ayaa shaaca ka qaaday inuu aad ula mid yahay.
Source source: Warbixinno cilmiyeysan]
Sawirka kore, A iyo C waa geeska dhabta ah, halka B iyo D ay yihiin geeska horsehair. Geeska beenta ah waxaa loo adeegsan karaa si la mid ah waxa dhabta ah, oo aad bay u adkaan doontaa qof aan haysan qalab cilmiyeed inuu isbadal sameeyo.
Fikradda halkan ka jirta maaha in lagu dabaqo geesaha beenta ah ee wiyisha. , dabcan, laakiin halkii lagu daadadayn lahaa suuqa madow oo leh nuqulo geeska ah oo aad ugu dhow xaqiiqda oo aan cidina is ogaan doonin. Iyada oo baahida noocaas ah ee waalan ee geeska rhinoceros iyo suuqa gebi ahaanba aan la xakameynin ee loogu qaybiyo, ku darista geesaha beenta ah ee halabuurka ayaa u muuqda wax aan macquul ahayn.
ugaaratada. Ugu dambeyntiina, halista ugaadhsiga sharci darrada ah ee xayawaanka noocan ahi waxay bilaabi lahaayeen inay ka bataan abaalmarinta lacagta iyo, sida caadiga ah, shirkadda oo dhami way burburaysaa. Sikastaba, waa rajo.
"Baadhitaankeenu wuxuu muujinayaa inay aad u fudud tahay oo ayna raqiis ahayn in la sameeyo shey dabiici ahaan u eg oo dabiiciga u eg oo jilicsan dhuuxa qaaliga ah ee wiyisha," ayay yidhaahdeen saynisyahannadu.
Waxaan u reebnay dadka kale inay isku dayaan inay riixaan tikniyoolajiyadeena hore waxaana laga yaabaa xitaa inay ilaa iyo hada ka dhaadhiciyaan kuwa khiyaameeya inay iibsadaan inay bedelaan ama halkii ay ka doorbidi lahaayeen geeska wiyisha dhabta ah oo aad qaali u ah. Waxaa wali la arki doonaa in ku soo duulashada suuqa iyada oo daabacado geesiyaal wareersan ay horseedi doonaan samatabbixinta wiyisha wareegaya. "
Isha Sawirka: Paul Mayall / imageBROKER / Shutterstock
Xarunta Hawada Caalamiga ah waxay lahaan kartaa nolol cusub - BGR
Sources: Mou cible Campos en tant que chef de transfert
Ka baadho qarsoodiga gidaarka weyn VPN kaydka - VIDEO